Ego ole ka ndị ọrụ igwe kwụ otu ebe na-akwụ ụgwọ kwa elekere? - Bgba Ígwè
Isi > Bgba Ígwè > Onye na-eme igwe igwe na nso igwe - otu esi ekpebi
Onye na-eme igwe igwe na nso igwe - otu esi ekpebi
Ego ole ka ndị ọrụ igwe kwụ otu ebe na-akwụ ụgwọ kwa elekere?
Onu ahia ulo ahiabuaga-abụ ihe ruru $ 60 /aka elekere. Ọ na-elebara anyaọtụtụihe - gaa chọta otu barnetts ọrụ njikwa sistemụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakọ nke a n'onwe gị na ndị niile na-agbanwe agbanwe.Mar 12 2010
Gba eMTB bụ ihe ọchị, mana ị kwesịrị ịdebe ya ma ọ bụ na ọ ga-efu gị ezigbo ego. Taa, m ga-agbaji ụgwọ ndị a otu otu. ma hụ ole ị ga-agbanye eMTB gị maka otu afọ. (Egwu Eletrọniki) Ihe mbụ ị ga-atụle bụ igwe elektrọnik ị nwere ma ọ bụ igwe ele e-ugwu ị na-achọ ịzụta.
Na njedebe nke ubochi, igwe eletriki e-elu nwere ihe ngwucha di elu. Yabụ ọ bụrụ na ị dochie ihe ndị a dị elu ị ga-emefu nnukwu ego. E-igwe eletriki e-etiti ga-enwe ihe ndị dị larịị, n'ụzọ ahụ ị ga-echekwa nnukwu ego mgbe a bịara iji nweta ihe ndị a dị elu dochie.
Bikelọ ọrụ igwe kwụ otu ebe na-agba mbọ maka ngwa ngwa na ngwa ngwa ruo ọtụtụ afọ. Dị ka ndị na-agba e-igwe kwụ otu ebe, naanị ihe anyị chọrọ bụ ezigbo ọfụma site na ngwa niile anyị. Anyị achọghị itinye nnukwu ego na ihe nwere ike inye US obere uru na arụmọrụ n'okporo ụzọ ahụ, anyị chọrọ ka ọ dịrị ogologo oge.
Naanị buru n’uche na cassette paụnd 300 pere mpe agaghị ebuli gị ma ọ bụ gbadaa ọsọ ọsọ karịa cassette paụnd dị ọnụ ala. (Upbeat music) Ya mere, ka anyị lelee ezigbo ego nke ịgba e-igwe gị. Anyị nọ ebe a na UK yabụ anyị ga-eji pound sterling na nke ahụ.
Ugbu a otu n’ime ụgwọ izizi ị ga - ahụ bụ ịgba batrị gị na igwe eletriki eletriki gị. Dabere na nchikota nke batrị na chaja ị na-eji na-agbanye batrị gị, ọ na-ewe ihe dị ka awa anọ na isii iji kwụọ batrị ahụ na efu kpamkpam na nke zuru ezu. Nke a dabere na ụdị batrị ị na-eji.
Nke ahụ ga-efu gị ihe ruru elekere ise ruo elekere 10 nke ọkụ eletrik ma e jiri ya tụnyere ihe dịka pence 2.5 iji sie ketulu. Ọ bụrụ na ị na-eme ya kwa ụbọchị, ka anyị kwuo maka njem ma ọ bụ ihe ọ bụla ọ ga-efu gị £ 36.50 kwa afọ.
Ya mere tụba pusi 36.50 na pusi. (Joy Music) Taya gị na e-igwe kwụ otu ebe nwere ike maa a pounding, n'azụ taya bụ maka na-akwọ gị n'elu ugwu.
Wheelkwụ na-aga n'ihu na taya gị bụ ọrụ maka ijide n'aka na ị ga-enweta njigide gị site na ihu gị na nkuku gị. Ọ bụrụ n ’ị nwere taya ọgbaghara na eMTB gị, ịgaghị arị ugwu, ị ghaghị ime breeki ọ bụla. Ihe ọzọ ị ga-atụle bụ ngwongwo taya.
Ugbu a taya ụlọ dị nro ga - ejide ya n'ụzọ ka mma, ma ọ bụrụ na ị na - anya ya n'okporo ụzọ, ọ ga - ada ngwa ngwa karịa oge ole ị na - ebugharị na - adabere n'ụdị taya ị ga - enweta. Mgbe ị na-agba nwayọ, ụzọ apịtị, ị gaghị enwe otu ụdị taya ahụ dị ka onye na-agba ụzọ ụkwụ siri ike. Ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọala otu ugboro n’izu ma ọ bụ na-anya ụgbọala ụbọchị ise n’izu, ị ga-ahụkwa ọtụtụ taya taya.
Achọpụtara m na m na-eji okpukpu abụọ nke taya otu afọ. Nke ahụ bụ ihe dịka 50 pound kwa taya, oge nke anọ, 200 pound. (egwu obi ụtọ) Mgbe ị na-agba ịnyịnya na-enweghị tube na igwe eletrik gị, ị kwesịrị iche echiche banyere mmezi ntọala na-enweghị tube.
Ikwesiri imeju ihe mkpuchi ahụ iji nye nchebe oge mgbapu gburugburu. Otú ọ dị, nke a ga-adịgasị iche dabere na ebe ị bi na ọnọdụ okpomọkụ, mana ịkwesịrị ime nke a ihe dị ka ugboro atọ ma ọ bụ anọ n'afọ. Echere m na ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba ịnyịnya, ị ga-eche banyere hoses ịchọrọ idozi ma ọ bụ mgbapu, yabụ, ị ga-eche maka ihe ndozi ihe ndozi na hoses maka afọ ahụ, ugbu a, ọ ga-eji akara na-enweghị tube na tubes ịchekwaa ihe dịka 20 pound a afọ iji debe ihe. (Joy music) Ihe nkedo gị nwere ike ịbụ otu n'ime ihe ndị kachasị eyi nke ihe niile dị na igwe eletriki gị, ugbu a ịkwesịrị ịdebe ihe site na ịda mbà na ịmịpụta sarkar ahụ tupu oge ọ bụla.
Ma ọ bụghị ya, mgbe agbụ a gafere, ị nwere ike wepụta nkedo, ị nwere ike wepụta cassette na ndị a bụ ọnụ ọnụ karịa naanị sarkar. Ugbu a ọ bụrụ n ’ịchọrọ idochi agbụ ahụ ị ga-aga maka agbụ ụzọ dị n’etiti, ọ ga-efu gị ihe dị ka Your 30. Casset gị e-igwe kwụ otu ebe bụ ihe ọzọ nwere ike iguzogide na-ada ụda.
Ga-enweta ugbua na egwu elu na egwu elu, ọkachasị n'okpuru ibu na draịvụ ndị ahụ. Ugbu a, nkezi katrij ga-efu gị ihe dị ka £ 80 iji dochie anya. Ugbu a, akụkụ ọzọ nke ụgbọ okporo ígwè gị nke nwere ike ịka nká ga-abụ agbụ n'ihu. A na-ekwupụta nke a na ihe dịka igwe Bosch Generation 3 ebe ị nwere obere ihe nkedo n'ihu nke pụtara na ọ ga-eme ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ma e jiri ya tụnyere ihe dị ka nkedo ezé 34 ma ọ bụ 36 anyị nwetara m banyere igwe kwụ otu ebe a.
Kedu mgbe ị chọrọ iji dochie agbụ ahụ? Ihe mgbanaka ahụ na-efu ihe dị ka £ 30 maka nke ọhụrụ. Ka anyi achikota ego nke powertrain. Ugbu a, ọ nwere agbụ ahụ, ihe nkedo na cassette.
Cheta, ọ bụrụ na ịchọrọ ka ike ọrụ gị dị ka o kwere mee, ị ga-edochi ihe ndị a niile n'otu oge. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-anọkarị n'okporo ụzọ, ịchọrọ ihe dị ka ụzọ ụgbọ oloko abụọ kwa afọ, nke ahụ na-efu £ 280 kwa afọ iji nweta ndụ kachasị na draịva gị. (Joy music) breeki mpe mpe akwa gị eMTB nwere ike inwe mara mma ndụ kwa.
Ha na-ahụ maka imechi igwe kwụ otu ebe na oke ọsọ, jikọtara ya na mmiri na ụfọdụ unyi na mado site n'okporo ụzọ, pụtara na ọ nwere ike ịbụ ihe mara mma nwere akwa na akwa. Ugbu a, ọ bụrụ na ịchọrọ ka ihe mkpuchi breeki gị dị ka ogologo oge o kwere mee, ị ga-agbakwunye pịlị sintered ebe ahụ. Ugbu a, ihe nkpuchi breeki na-abata na paụnd 15 maka wiil ọ bụla, ị ga-achọkwa prọ abụọ abụọ breeki otu afọ, ọbụlagodi.
Ya mere, nke ahụ bụ 60 pound na-abanye na nwamba a c) Akụkụ nke e-bike gị nke a na-elegharakarị anya bụ nkwusioru. Nke a dị ezigbo mkpa ugbu a iji gosipụta mmetụta nke ịnya ụgbọ ala anwansi na mbara ala. Gị ndụdụ chọrọ ntakịrị ịhụnanya, ọ nwere ike ịchọ mgbanwe mmanụ ma ị nwere ike dochie akàrà ahụ, ọ dịkwa ezigbo mma maka ujo azụ.
Ugbu a ọ bụrụ n’inwe igwe kwụ otu ebe zuru ezu, ị ga - agbanye ntakịrị azụ n’azụ n’ihi na ị na - aga ije. Y’oburu n’inwe obi oma ijicha n’azu ike, ihe ikwesiri ime bu Ndị a ga-efu £ 100 njedebe ọ bụla £ 100 maka onye na-akwa akwa siri ike £ 200 maka mmezi nkwusioru maka afọ ahụ. (Ọyụ nke Music) Ọ bụrụ na ị gaa eMTB gaa ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe iji rụọ ọrụ ya, ụgwọ ahụ ga-arị elu karịa ka afọ ahụ na-aga n'ihu.
Anyị nwere ọtụtụ isiokwu ebe a na EMBN na GMBN na GCN maka mmezi kwa ụbọchị ị nwere ike ịme e-igwe kwụ ọtọ gị onwe gị Chefuo na ịchọrọ ụfọdụ ngwaọrụ iji mee nke a ka ọ ghara ịbụ n'efu. Ọ bụrụ na ị maghị banyere mgbanaka ahụ, ị ​​ga-eburu igwe kwụ otu ebe na ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe ka ọrụ ya wee mara mma. Ọ mara mma, ị ga-achọ ọrụ anọ kwa afọ.
Ugbu a ndị a gbadara na gburugburu 50 pound na nke ahụ bụ naanị maka ọrụ. Ikwesiri itinye aka na akuku. Yabụ ịchọrọ ọrụ anọ iji mee ka igwe kwụ otu ebe na-aga ihe dịka otu afọ nke bụ paụnd 200 iji mee ka ọ na-aga. (Joy Music) Akụkụ dị mkpa nke ilekọta e-igwe gị bụ ịsa, nhicha, ite mmanụ, imebi ya, yabụ ị ga-eburu ihe ndị a niile.
Nwere ike iji mmiri naanị saa igwe kwụ otu ebe ma ọ nweghị n'efu, mana ịsa ahụ pụrụ iche ga-eme ka ndụ gị dịkwuo mfe. Ihe ndi ozo dika ndi mmanu mmanu na ndi ozo maka igwe na ugboala gi bu ego ozo. Echere m na ọ dị gị mkpa ịgbakwunye na 50 pound kwa afọ iji mee ka igwe kwụ otu ebe a na-agba ọsọ mara mma (t music) Ya mere, ngwa ngwa ngwa ngwa nke nọmba ndị a iji mee ka e-igwe mara mma kwa afọ.
Ọ bụrụ na mgbakọ na mwepụ nke uche m na-enyere m aka, echere m na ọ bụ kilogram 1046 na 50 pence iji mee ka e-igwe mara mma kwa afọ. Echefula na ọ dabere na ego ole ị na-agba ịnyịnya, ebe ị na-agba ịnyịnya na ụdị njem ị na-eme, yana ụdị igwe kwụ otu ebe ị na-edochi akụkụ ndị a. Mana ka anyị mara n’igbe igbe dị n’okpuru gbasara ego ole ị na-akwụ na e-igwe kwụ otu ebe na akụkụ ndị kachasị akacha mma, n’okpuru.
Nye anyị isi mkpịsị aka ma ọ bụrụ na ọ masịrị gị, m ga-ahụ gị ọzọ.
Ndị na-arụ ọrụ igwe kwụ otu ebe bụ ezigbo ọrụ?
Igwe igwe igwekpata uba
Ọfọn, ọ bụghị n'ezie. O di nwute na obughi ezigbo egooruna n'ọtụtụ ebe ị ga-akwụ ụgwọ kacha nta ma ọ bụ karịa n'elu. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na aezishop, ọ ga-ekwe omume ịme aeziụgwọ, ma a gaghị ebugo gị. Nwere ike ichekwa otutu ego dikaarụzi.11 nov. Dec 2019
Taa, obi dị m ụtọ na onye ọrụ ibe anyị Park Tool na onye nkuzi anyị Calvin Jones na-akwado m. Daalụ maka isonyere anyị, Calvin. - Ọ dị mma ịnọ ebe a wee nwalee ya. (ọchị) - Awesome, na nke gara aga izu ole na ole anyị na-ajụ gị ajụjụ gị banyere bike mmezi na-arụzi ụgbọala, na Calvin bụ a bit nke a guru na nke a, na ọnụ anyị jisiri ike nweta ajụjụ ndị ahụ ruo ndị kasị nkịtị na belata ajụjụ ndị na-adọrọ mmasị. - Ihe ọchị. - eriri.
Ajụjụ a anyị nwere site na PCOLEMAN na 1982 bụ: 'Kedu ka anyị ga-esi belata esemokwu na ihu' Mech? 'Ma ọ bụ nke ahụ bụ naanị ihe ị kwesịrị ịdị na-emeso?' - Nke ahụ dị mma. Na ebe a na UK, n'ezie, anyi choro itufu watts. Na ebe ka mma ịchekwa ya karịa ụlọ nke Mr Watt n'onwe ya.
James Watt, otu n'ime ndị Refeyim. Yabụ na anyị achọghị ka ete, a ga-edozi ya nke ọma. Mgbe ụfọdụ ọ na-ehichapụ n'ihi na ndị nrụpụta karịrị ikike, ọ pụtaghị na ọ bụ gị.
Yabụ ka anyị bido site na isi ihe ole na ole, na-agbada site na isi. Yabụ nke mbu, kedụ elu na ala, ọ dị mma? Ya mere, elu ebe a. Ya mere, anyị chọrọ na mma nke ukwuu abụọ na atọ millimeters n'elu elu ezé.
Ukwuu dị elu ma dịkwa ala, adịghị mma. - Kedu ihe ga - eme mgbe ahụ, tụfuo yinye ahụ? - would ga-atụfu ya ma ọ bụ gbanwee ma ọ bụ jikọta ya n’ụzọ adịghị mma. Mana ihe kachasị mkpa banyere akụkụ rubbing bụ ntụgharị.
Nke ahụ bụ ihe anyị na-eme banyere ebe a. Nke a bụ otú mkpọchi ahụ si tọghee, ọ nwere ike ịtụ gburugburu ihe nkwado ahụ ma anyị chọrọ ka ọ dịrị ka nke ahụ na-adọkpụ. Preferfọdụ na-ahọrọ ya ntakịrị n’èzí.
Ya mere, okwesighi ihicha ya nke oma na ntaneti anyi, uzo abuo abuo ebe a bu ihe nkpuchi, ha mekwara igbe. Create mepụtara igbe nke ọ ga-abanye wee kwụsị. Yabụ na anyị achọghị ka ọ gafere oke nha.
Anyị achọghị ịgafe otu ebe. Yabụ ihe ndị a bụ oke Chris. Ọ bụrụhaala na ha ziri ezi, anyị emebeghị.
N'ihi esemokwu ma ọ bụ nkedo nke eriri ahụ, cheta nke ọma na ọ na-adọta, mgbe anyị nọ n'elu ebe a na osisi anyị, ọ na-emegharị ya? Ka anyị mee ajọ ihe atụ ebe a. (Gear spins) Ana m ete, ana m ete, gini ka m ga eme? (sighs) Daalụ, ọ dị jụụ ugbu a. Naanị egwuregwu, ọ bụghị mgbe niile, n'ihi na cheta, mgbe ihe ndị a siri ike na-eme, oxygen na-ahapụ ụbụrụ maka ụkwụ.
Nke ahụ bụ echiche m.- Ee.- Ya mere gịnị na-akpali ya? na-adọ adọ na USB.
Ezigbo ihe ọzọ kpatara eletrik. Ọ na-arụ ọrụ ahụ, ịkwesighi icheta. Yabụ na enwere mgbe ị kụrụ ugwu, ịnwere ike ịgbadata obere mgbanaka, ma ọ bụ ebe a ka anyị ga-amalite ịnweta nsogbu catenary.
Yabụ, ị nwere 11 na azụ. N'oge na-adịghị anya, anyị ga-enwe ike eleghị anya 12 n'azụ, abụọ n'ihu, 24 njikọta enwere ike? Ọ bụghị dị ka ndị na-emepụta si dị. Don't naghị enweta ọtụtụ akụrụngwa eji arụ ọrụ - elektrọnik na-atọ ụtọ n'ihi na a na-egbochi ya n'ụzọ nkịtị.
Emela ihe ahụ. Ha anaghị ekwe ka ị jiri akụrụngwa a. Mana ọ bụrụ na ọ bụ akwụkwọ ntuziaka, anyị na-atụkwasị na kọmputa nọ n’elu oche.
Ọfọn, n'elu ogwe anyị kwesịrị ikwu. Pulldọrọ n’azụ ka ị ghara ọkọ. Ọ dị mma, nke a bụ otu o nwere ike isi mee.
N’ezie, n’ezie, ndị na-emepụta ihe ejirila agbụ rụọ ọrụ ya ka anyị wee nwee ike ịhụ na agbụ na-agbanwe agbanwe, ọ dị mma? Yabụ, ọ bụrụ na ị gabiga nke a, ị nwere ike ịkọ ụdọ n'ihu. Na-abịa a ole na ole nke kaadị na ọ bụ jụụ, nke ahụ bụ ma eleghị anya emeputa nsogbu. Nanị họrọ ụzọ dị iche.
Mana ihe niile edoziri ya, ị ga-enweta ọtụtụ n'ime gia na-enweghị esemokwu. Ọ bụrụ na ọ na-ete, nke ahụ ọ bụ nnukwu ihe? Ah.- Ugbu a na isiokwu nke gia na derailleurs, ajụjụ anyị na-ewere iji were nke a gụọ ya.
Onye a si n’aka Matthew Zechel. - Ee - Aka nri, anyị chọrọ ka ọ dị mma. Ya mere, gịnị ka anyị na-eme ebe a? - Yabụ, anyị na-alaghachi ntakịrị ebe a, ọ bụghị anyị? - Nri, ka anyị hụ, ka anyị lee ebe a.
Maka derailleur anyị nwere pole dị ala, ọ na-enye esemokwu. Anyị na-akpọ nke a ihe, ọ bụ T-pole. Onye nke elu na-edu, nke a bụ ihe kachasị mkpa, ọ na-eduga n'agbụ gị.
Ihe ọkụkụ G. Ọ dị mma, yabụ njedebe anyị na-ekpuchi H na L, wee kụzie akụkụ ahụ, nke ahụ dị mkpa ebe a. Ya mere, mee ka nke ahụ sie ike ma tọpụ ya, nke na-agbanwe, ọ bụrụ na m mee ka ihe ahụ sie ike, nke a ga-eme.
Kedu ihe na-aga? Anyị nwere ike ịhụ na ebe ahụ na ndị na-ege ntị? Ntuziaka ahụ na-agbadata, gbadata, gbadata ma pụọ. Agbapụ? Up, elu, elu, elu, elu na nso.- Ya mere ọ bụrụ na ọ na-tightened kwa uko na anyị nwere oke chakoo, gịnị bụ, gịnị bụ ezigbo nsogbu na anyị nwere ike na-enwe? - Nke a bụ ezigbo kpochapụwo, anyị nwere nnukwu ọdịiche ebe a.
Ya mere umunne anyi ndi ugwu na umu nne anyi tupuru isi n'okporo uzo na nnwale a. Ohaneze ebe a ị chọrọ ịbịaru nso, mechie ka ọ gbanwee nke ọma. Ka anyị jide anyị yinye ọzọ na-ekwu banyere mgbanwe.
Ọ DỊ MMA. Aga m abụ cassette Kwadobe. You'll ga-abụ, jidere ya, ee, ị bụ G-pulley ugbu a, yabụ ị ga-agagharị aka ekpe na aka nri ịkwaga m.
Mba, kwue, ee. Laa azụ, gaa azụ ma pụta. Lee gị niile a na mgbanwe.
Yabụ, ka anyị bugharịa B ahụ, megharịa mkpọtụ ahụ karịa. Obere mkpụmkpụ ụdọ a, obere slack, ọ ga - eme ka ị rụkwuo ọrụ ahụ. - Eeh. - Yabụ, tere aka, kedu, nke a ga - emegharị iji gbanwee.
Ezigbo nso, ee obere slack.- Ọ bụ ọtụtụ ịrụ ọrụ nke ọma.- Ee.- Ọ bụ eziokwu, anyị ga-aga n'ihu na ihe dị iche ugbu a, na n'ezie nke ahụ bụ ihe m masịrị ma nwee mmasị ịnụ ọkachamara.
Ya mere, nke a sitere na RUNFATBOYRUN7, ha kwuru, sị: 'Olee otu ị si elekọta ihe nkwado ala ahụ n'ụzọ ziri ezi?' Mgbe ahụ PASSBAUER kwuru, sị: 'M na-agbaji' n'ihi na m siri ike. 'Kedu ihe m kwesịrị ịme?' - Ọfọn, Agwara m njikọ m na British Cycling na ha ga-achọ ịgwa gị okwu ma ọ bụrụ na ị mebie ntọala ndị ahụ niile. (Ọchị) Yabụ, inwere, ikekwe ị nwere ikike ebe ahụ.
Ma ọ bụ ma eleghị anya, Cytech ma ọ bụ ATG nwere ụfọdụ ọzụzụ kwesịrị ekwesị na ngwa gị. Yabụ, otu n'ime ha abụọ. Yabụ kedu ihe ị na-eme ebe a N’ụwa nke ugbu a, ị na-akacha, ị na-achụpụ ya, tụpụ ya.
Na-anya ya, ị tụfuo ya. Nlekọta na oge ochie, anyị (na-asụ ude) anaghị eme nke ahụ. Ọ dị obere ihe ị ga - eme dabere na nkwado nkwado
Yabụ, anyị nwere ọtụtụ usoro ọdịnala n'ụdị ebe a. Eriri a dị ebe a, ha na-etinye akara n’elu ya ka ọtụtụ ihe ghara ịpụ. Younweghị ike wepu nke ọma n’emeghị ya emebi.
Ha achọghị ka ị mee nke ahụ. Ha bụ ndị maara ihe. Ha si na izu nke ohuru, bia.
Ya mere, anyị nwekwara ụdị usoro a na-pịa nke, ee, nye ya, dị nnọọ ka igwe kwụ otu ebe, mana nke a bụ akara ọzọ. Ekwere m na anyị nwere ike ịchọpụta. Ebee ka hama Huh hama? (ọchị) Ee, ị ga-akụtu ya.
You ga-eweghachi ya? No, mba, ya mere, kpo oku a, enwere ike iwepu ya. Ya mere tufuo ya. Nke a, dabere na ihe nlereanya ahụ, Ọ bụrụ na ị nwere ike wepu mkpuchi ahụ, wepụ akara ahụ, enwere ọtụtụ akara roba na ime ụlọ ahụ.
Yabụ ebe a, anyị nwere ike iburu akara akara, anyị na-esi n'akụkụ dị n'ime, ọ bụghị n'èzí, ọnụ dị n'ime ma jiri nlezianya lelee ma bulie nke ahụ, oh, enwere obere ịma mma ndị ahụ n'ebe ahụ. Yabụ ebe a, anyị nwere ike ịsacha na ahịhịa ezé, hichaa ụfọdụ ihe mgbaze, jiri nlezianya kpughee, kpoo wee tinye griiz, mkpọ, mkpọ. Mgbe anyị na-agbanye akara ahụ, ọ na-agbanye griiz n'ime.
Yabụ na isiokwu nke dochie na ịwụnye brackets n'okpuru, ugbu a enwere m ike ikweta na n'ihi na m nọgidere na-etinyezi akara aka BB30, ma eleghị anya ọ bụ maka ihe kpatara - - Ọ dị mma. - N'ihi na m wụnye ya ọhụma. Enweghị m ngwá ọrụ maka ya.
Ya mere, amaara m na nke a bụ isiokwu sara mbara, enwere ọtụtụ brackets n'èzí. Ndụmọdụ ọ bụla ị nyere ndị mmadụ gbasara nke a? - Ọfọn, ịnwe ngwaọrụ kwesịrị ekwesị maka ọrụ ahụ dị mkpa. You've họrọla nke ezigbo mma, BB30.
Yabụ tinye ya na Ọ bụrụ na ọ na-eri eri, chịrị iwu, isi sie ike ngwa ngwa ahụ, ị ​​nwere ike ịpụpụ ha. Ọ bụ nnukwu eriri, eri dị mma, ya mere ndị a ga-esi ike.
Pressdị pịa. Odi nma, ichoro ya nke oma. Nke a bụ aghụghọ.
Golddrops dị mkpa ebe a. Yabụ enweghị eri na etiti ahụ, anyị ga-ewere nke a ma ọ bụrụ na anyị nwere ike iji aka ya kwanye ya aka, adịghị mma. Ọ bụrụ na ịnwere, ọ bụrụ na ọ na-agbanye ike nke ukwuu, enwere ike ịpịa ya n'ụzọ nkịtị.
gatorade na mmiri
BB30 bụ kpochapụwo. Ọ bụ ihe dị oke, ọ bụ katrij na nke ya, ọ bụrụ na anyị asọba ya, ọ bụrụ na ọ siri ike, ị nwere ike ịbughachi ihe nkedo ahụ azụ ma ha ga-aka nká. - Ọ dị mma, ajụjụ na-esote Chris David.
O kwuru, sị, 'Olee otu ị ga-esi mee ka ihe ọkpụkpọ gbara gburugburu ma ọ bụ nke dị warara?' Ekwesịrị m ịsị, Amaara m na mgbu ahụ. Enwere otutu kposara nke m nwere n'ụlọ, ụjọ na-atụ m ma ọ bụrụ na m ga-atọpụ ma ọ bụ mee ka ha sie ike. Anọ m na nsogbu.
Ya mere, m ga-achọ ịnụ ndụmọdụ gị na nke a.- K, nke a ga-abụ nne gị na-agwa gị okwu. You kwesịrị ịtụle ya tupu ị lawa.
Ya mere, gịnị ka anyị na-ekwu? Nkwadebe mgbe ị na-arụ igwe kwụ otu ebe. Ya mere lubrication site na mgbe ụfọdụ mkpọchi mkpọchi ma ọ bụ na ọ na-egbochi nchara na corrosion. Ma ọ bụ ihe mgbochi-ijide, ma ọ bụ abụba, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala gbụọ ihe nzuzu ahụ.
Ọ dị mma, yabụ nweta ya ozugbo. ma kwue okwu banyere ngwa oru ka oghara imebi ihe. Yabụ, ezigbo mma spana, anyị chọrọ ka ọ dịrị n'ọnọdụ dị mma.
Anyị chọkwara ihe a na-akpọ ezigbo zụta, yabụ ebe anyị gara, ọ ga-aga na oke ego. Odi mma ka anyi gaa Nke a bu ano. N'ebe a, anyị na-abanye n'ụzọ niile.
You'll ga-ahụ ndị mmadụ, ha na-eme ọsọ ọsọ, ha na-amalite, oh, ee, ee, ee, ee, nke ahụ dị mma. Aga m agbanye ya. - Ihe ruru unyi niile n'ime o I nweghị ike kpamkpam - - Nke ahụ ziri ezi.
Ma dịkwa mma anyị Tri-Fans.T maka titanium. Titanium kposara bụ ndị a ma ama maka isi azọrọ azọrọ na metal siri ike.
Odi mma, ya mere i choro itinye aka zuru oke ma gbanwee uzo kwesiri. Yabụ nke a bụ nke gị, anyị kwụsị ya. Ya mere, anyị nwere eri ndị a kwadebere na anyị ga-azụ ha.
Ndị a nwere ike ịka nká n'oge ụfọdụ. Enweghi ụdị ihe dịka kọntaktị ogo 360. Ọ bụ naanị n'akụkụ nkuku ka ha na-eyi ọhụụ.
Nke a bụ mkpọchi rotor gị, ọ bụghị ya? Yabụ, anyị nwere nwatakịrị nwoke gbara agba nke a bụ ọgba aghara. Nri usoro? Ọ bụghị nke a. Ma ọ bụ ihe na-adịghị mma, ngwá ọrụ na-ezighi ezi. - Ugbu a ọtụtụ ihe na-eme n'ezie, m ga-ekwu maka triathlete, mgbe anyị na-apụ na igwegharị anyị TT.
Anyị ga-ewepụ akwụkwọ ikpe anyị oge niile. - Ee.- Ma otutu oge ihe nkedo ha ji eme ihe ebe a, amaghim ma obu ihe ndi ha ji eme ihe, ma ha di ka ha na eri ma obu ha nwere ike ijide ngwa ngwa.
Enwere m mmasị ịnụ ihe ngwọta ya bụ - ọnụọgụgụ na-adịkarị nwayọ, amaara m na onye na-achọghị ịlụ achọghị ịnụ nke a. Nke a dị mfe. Ọ dị mma ebe a, nrụgide dị mma mgbe ị na-atụgharị ma na-ekpo ọkụ.
Mildfọdụ obere okpomọkụ nwere ike ibugharị ihe n’ime ya. Ọ dị mma, yabụ ị gbasaa. - Gịnị na - eme ma a kpochaa ya, ma? Enweghị ike ịzụta mkpọchi ahụ? - Akara, mma - ị no na nsogbu. (chịrị ọchị) - Anyị bụ ndị anyị? Anyị ga-eji ndị ọrụ aka anyị ọkachamara na ihe anyị ga-eme, ụmụnne m ndị nwoke na ụmụnne ndị ọkachamara, were aka-ekpe aka ekpe.
Aka ekpe bu ihe nzuzu? Ọ na-akụda na elekere na-adịghị anya ma na-akụda oghere n'ime ya, mana ka ọ na-ada ya, ọ na-eweghachi ihe dị mma - yabụ ihe anyị na-ekwu ebe a nwere ike bụrụ ebe a, were ya gaa ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe gị. - have nwere ya, ee. Ikwesiri iburu ya na uru.
Were ya, buru ya gaa ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe. Yak mmọ ẹnọ fi utịn̄ikọ. Ngwa, Calvin, ugbua, maka obere ọkụ ọkụ, a bụ m, otu a.
Enweela m usoro nhicha dị ogologo, dị ka nke ahụ. Ugboro ole, oleekwa otu m ga-esi ehichapu m n’osisi? Nke ahụ sitere n'aka Carl Halnowell wee soro. Ọ nwere ọghọm dị na nhicha igwe kwụ otu ebe na igwe igwe na-emekarị? Anụla m ihe ndị a, ma eleghị anya ọ bụ naanị ihe ngọpụ. - Ọ dị mma, otu ebumnuche nke Park Tool bụ iji mee ka anyị rụọ ọrụ igwe kwụ otu ebe anyị, ma debe anyịnya igwe niile oge niile na ịghara ịgba ịnyịnya.
Ya mere, na-ehicha igwe gị mgbe niile. Ọfọn, nke ahụ abụghị eziokwu. Echere m, n'eziokwu, ndị mmadụ na-ehicha ntakịrị.
Oge ọ bụla dị mma. Nnukwu agbụrụ iji mee ka ị nwee obi ụtọ dị mma. Mana akụkụ ndị dị mkpa, ihe olu ahụ, bụ ezigbo ihe atụ.
Ihe ndị a abụghị arịa nri. Ọ dịghị mkpa ka ehichaa ya. Anyị nwere ike ịhụ ya, ọ na-ahụ anya.
Yabụ, chee echiche otu ahụ. Anyi choro ikuputa dipstick n'ime ugbo ala gi ma oh mmanu o ruru unyi, ekwesiri m ihichapu nke a ma nweta mmanu ohuru. Ọ ka na-arụ ọrụ, ọ dị mma mgbe ọ ruru unyi.
Ya mere oke nhicha adịghị mma maka igwe kwụ otu ebe. - Ọ dị mma. Aga m aga n'ihu ịgbaso nke a.
Fozzie Bear kwuru, sị, 'Kedu ihe kachasị mma maka nhicha izu n'ime izu?' - Ntucha nhicha kachasị mma maka etiti izu a ga m asị ma ọ bụrụ na ị bụ nwoke ezinụlọ, akwa akwa ma ọ bụ akwa nhicha ahụ. Yabụ, naanị wepụ akwa nhicha ahụ na karama ahụ ma wepụ ha. Hichapụ, hichaa, hichaa, dị ọcha, dị ọcha.
Ọ ga-adị mma. I lee anya nke ọma, e nwere unyi ụfọdụ. Naanị kwụghachi azụ ma ọ ga-adị mma.
Yabụ, na-ehichapụ ngwa ngwa, ọ bụ ihe niile ọ na - eme - Amamiihe, dịkwa mma. Ọfọn, Goodoffsteppertenor kwuru, 'Ugboro ole ka ị ga-ete mmanụ akụkụ niile nke igwe?' - Pfft, nwata, nke ahụ bụ akụkụ siri ike. Ọ bụrụ na m tufuo nọmba ị ga-atụsasị spaghetti na mgbidi.
Ọ na-ewe ya. Ọ dị mma, agbụ ahụ bụ ezigbo ihe atụ. Ọ ga-ewekwu.
Ọ bụ mgbe ọ kpọrọ nkụ. Ọ dị ka ihe ruru unyi, ọ dị m mkpa mmanụ ya? Mba, ọ ka dịkwa, ị ka na-eche ihe ebe ahụ, hapụ ya. Ọ nwere ike ịdị iche iche.
Gbọala ahụ nke bebi anyị kwuru okwu ya nwere ike ịdọrọ gị, ndị a, ikekwe ugboro atọ n'afọ, ga-adị mma. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iji dochie ha otu ugboro n’afọ gịnị kpatara nsogbu? Yabụ, ndị dị mkpa na ndị na-ebugharị ihe, nke ahụ bụ ezigbo ihe - Ọ dị mma, olee maka anyị bụ ụmụ okorobịa na UK n'oge oge oyi-ee. - Mmiri dị ka ọ na-abanye ebe niile na nke m na-enwe nsogbu mgbe niile.
Trestles bụ ekweisi. Nke ahụ ọ bụ ihe ị kwesịrị ịhapụ? Re-tee? - Eeh. Na njikọ na katrij headsets dị mfe.
Tọpụ ya, hapụ ya ka ọ daa. Hichapụ ihe fọrọ nke nta ka ịmalite. Ma site na cartridges ọzọ.
Ọ bụrụ n’ịnye akara anyị kwuru maka ya ma tee ha mmanụ, nke ahụ dị mma. Mana imetu n'èzí ma ọ bụrụ na ihe ahụ arapara, nke ahụ ga-abụ ihe ziri ezi ịme. - Amamiihe, dịkwa mma, ka anyị gaba ugbu a.
Nke ahụ sitere na Coco Agarlis, ha wee sị, 'Nwere ike? You na-eji otu ụdị olu ahụ na cassette 10-speed 'tụnyere cassette ọsọ 11?' - I nwere ike na-aghọ aghụghọ ule a ọsọ otu ụzọ ma ọ bụghị nke ọzọ. Yabụ ọ bụrụ na m nweta ọsọ itoolu ebe a, m ga-enwe usoro 10 ọsọ, ọ ga-arụ ọrụ. Nweghị ike ịga n'ụzọ ọzọ.
Ọ dị mma, ya mere enwere m agbụ 10-ọsọ na azụ yana agbụ 9-ọsọ, agaghị eme. Ma ị nwere ike ịnwụ na onye na-aga n'ụzọ ziri ezi - gịnị bụ, gịnị bụ ihu ala, kedu um, ọbụlagodi na ọ na-arụ ọrụ, ị nwere ntakịrị mgbanwe na-adịghị mma? Ọ bụ na --- ọ ga-arụ ọrụ na ụfọdụ paseeji. Ọ ga-ete, na nke ahụ ga-eme na nhichapụ, ọ bụrụ na ndị a bụ oke nkedo gia, ha agaghị ete ya.
Y’oburu na ha buru ezigbo ibu, n’otu n’otu, ikekwe i gha inwe esemokwu na nsogbu ndi ozo. - Ọ dị mma. - pin nweta pinas ntakịrị, ha na-ebuwanye ibu ma mpe mpe ka ị na-aga 12. - Ọ dị mma, ajụjụ na-esote, ọ gụnyere ngwá ọrụ a dị egwu. - Yup. - Ọ bụ Nsogbu.
Nke a sitere na Mark W. wee sị, 'Olee otu m ga - esi jiri Park Tool's Cyclone Chain Cleaner ka agbụ ahụ daa mgbe ị na - eji ya?' - Nri, nke a bụ ezigbo ajụjụ. Peoplefọdụ ndị nwere nsogbu na nke ahụ.
Ya mere, anyị ga-ekwu maka nke a ọzọ, cheta ndu anyị na otu esi arụ ọrụ. Na yinye akara, yiri nnọọ. Yabụ ọ bụrụ na ịnara obere ngwaọrụ a ebe a, anyị ga-enwe ihe mgbaze na ya.
A ga-enwe brushes na-aga gburugburu ma kpochaa ya. Yabụ, nke ahụ bụ, yup. - Ihe mgbaze a.
Anyị na-awụpụ na. - Wụsa ya. Anyị nwere ike ịkwụsị ebe a, mana ọ bụrụ na ị dị ọhụụ na ngwa ọrụ a, m ga-eme nke a kpamkpam.
Kpamkpam nkụ. Maka na mgbe ahụ anyị nwere ike ịme ihe, ihe m na-eme bụ ịmụ etu esi eduzi. Ya mere, ọ bụrụ na anaghị m akpachara anya na njikwa ahụ, mgbe m gafere dịka nke ahụ.
Chọpụta ihe ga-eme? M ga-atọghe n'ihu yinye, ị ga-emekwa ka yinye guzozie. Yabụ ọ bụrụ na agbụ ahụ kwụ ọtọ, mgbe ahụ ihe niile dị mma. Mgbe m bịara ebe a, ọ na-ada ma ọ bụ daa.
Ya mere, gbalịa ya na-enweghị ihe mbụ. Naanị ka ọ dịrị gị mma, kwụ ọtọ, wee wụsa mmiri mmiri gị. Gaa n'obodo.
Ndụmọdụ ọzọ mara mma na nke a, buru ụzọ buru degreaser. Nri, anyi choro nke anyi ka obu nke onye ozo? Wunye ya na karama, jiri ya ọzọ wee nweta ya ọtụtụ ugboro. Ọ dị mma, mkpụrụ ọka ahụ na-aga na ala.
Ya mere, anyị jiri ụfọdụ kemịkalụ wakpo ya. Nwere ike iji ụdị ncha dị nro ọbụla wee sachaa nke ahụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ma ọ bụ ọbụna mmiri ochie dị larịị.
Kedu mgbe ị ga-enweta nke ahụ? A obere ọka dị na ya, nke abụọ itucha na a dị iche iche chemical. H2O ga-abụ kemịkal. Ọ ga - enyere aka wepu ihe mmetụ a.
Nri, ya mere rinses dị iche iche. Ajụjụ sitere na Ọ bụghị Kyland ha wee sị, 'Enweghị m ike ịgbanwe teepu aka m. 'Achọrọ m igwe kwụ otu ebe?' 'Ọ bụ eziokwu.
Ọ nweghị ike ịgbanwe ya. Nweghị ike ịgbanwe teepu aka. Inweta onwe gị igwe kwụ otu ebe ọhụrụ.
Ọfọn, nke ahụ bụ ihe na-atọ ụtọ. Amụtara m ọtụtụ ihe. Ya mere daalụ maka ịkekọrịta ụfọdụ n'ime anwansi gị. ' ịkọrọ anyị, Calvin.
Ma ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị, pịa isi mkpịsị aka ahụ elu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe ndị ọzọ sitere na GTN dị nnọọ pịa ụwa ma denye aha - wantchọrọ ịhụ ụfọdụ isiokwu nlekọta ụgbọala, ebe a, pịa ebe a. - Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịhụ edemede nke mmezi igwe kwụ otu ebe, pịa ebe a n’okpuru.
Beingbụ ọkaibe igwe kwụ otu ebe siri ike?
Mmadu aghaghi inweta ihe omuma tupu ogeịbụarụ ọrụ na aigwe kwụ otu ebeụlọ ahịa. Fọdụ mgbasa ozi na-achọ nkà ndị gara aga ma ọ bụ nkà ndị ahịa. Ọ bụ nnọọsiri ikeọrụ iji zụọ ndị mmadụ na nkà dị nro. Ọtụtụ ndị were mmadụ n'ọrụ nwere masiri ikea na-ewere nkà na nkà dị nro dị ka ezigboarụzi.Nwere ike 16, 2018
O siri ike ịbụ igwe njin igwe?
Mmadu aghaghi inwetuta ihe tupu eme ya oruigwe kwụ otu ebeụlọ ahịa. Fọdụ mgbasa ozi na-achọ nkà ndị gara aga ma ọ bụ nkà ndị ahịa. Ọ bụ nnọọsiri ikeọrụ iji zụọ ndị mmadụ na nkà dị nro. Ọtụtụ ndị were mmadụ n'ọrụ nwere masiri ikea na-ewere nkà na nkà dị nro dị ka ezigboarụzi.16.05.2018
Ego ole ka teknụzụ igwe kwụ otu ebe na-eme?
Yabụole na-emeha n'ezie-eme ka? Ná nkezi, aigwe kwụ otu ebearụzianam$ 29,282 kwa afọ dịka data sitere na PayScale. Oge awa ọ bụla, nke ahụ bụ ihe dịka $ 12.82. Kwụ ụgwọ nwere ike ịbawanye dabere na aigwe kwụ otu ebeahụmịhe nke ahụmịhe, agụmakwụkwọ, na asambodo.
Ekwesịrị m ịme mmezi igwe kwụ otu ebe m?
Gịkwesịrịmgbe niileọrụ gị igwe kwụ otu ebeiji hụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma yana na enweghị akụrụngwa akwara ma ọ bụ mebiri emebi. Ka ị na-arị ịnyịnya ahụigwe kwụ otu ebeka ị na-abịakarịkwesịrịịbụọrụya, ọkachasị mgbe ị nọkwasịrị na unyi, aja, apịtị na mmiri ozuzo.
Ego ole ka ndị nwere ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe?
The nkeziOnye nwe ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebeenweta $ 49,877 kwa afọ. Nke abuọ dị mma karịa nkezi mba maka ndị ọrụ niile, mana nke abuọ bụghị ọrụ dị mfe n'ụzọ ọ bụla.03.03.2014
Mmezi igwe kwụ otu ebe siri ike?
Ọ bụghịsiri ikema ọlị, ebe ọ bụ na ọtụtụ ịnyịnya ígwè na-adị mfe iji nwayọọ na-enwe obere ndidi. Inweta ngwaọrụ na inwe ezigbo ebe maka ha nwere ike bụrụsiri ikena akụkụ kachasị ọnụ.
Shopslọ ahịa ịnyịnya ígwè hà na-aba uru?
The nkeziigweụlọ ahịa na-ere ahịa na-akpata ụtụ isi kwa afọurunke pasent 5.5, mana pasent 25 kacha elu na-eweta ụlọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu atọ. Ha yiri onwe ha n'ọtụtụ ụzọ, mana mgbe onye nwe ụlọ ahịa na-emechi ụzọ maka oge ikpeazụ ka ịkwụsị otu afọ, ọ ga-abụworị ihe ruru $ 46,000 nauru.June 14. 2013 g.
Kedu ihe bụ akara na igwe kwụ otu ebe dị elu?
.B.eluoke ga-abụ 40-45% (66-80%akara), dị alaọgwụgwụga-adị gburugburu 20% oke (25%akara) na m ahụmahụ (dị ka onye ọrụ). ya mere maka $ 500igwe kwụ otu ebeoke 40% bụ $ 200, $ 300 mbụ na-efu ụlọ ahịa ahụ. Naakarausoro, $ 500igwe kwụ otu ebenke na-efu $ 300 N'ogbe bụ 200/300 = 66%akara.Jenụwarị 24. 2017 Nọvemba
Ọ nwere ụlọ ahịa na-arụzi igwe kwụ otu ebe dị m nso?
Maka arịrịọ gị 'Bilọ Ọrụ Mmezi Bike Mear Me' anyị hụrụ ọtụtụ ebe mara mma. Arịrịọ gị bụ nke otu egwuregwu. Anyị tụtụrụ ụfọdụ ebe ndị ọzọ dị jụụ dị gị nso. Na-achọ igwe nrụzi igwe kwụ otu ebe dị m nso? Ọ bụrụ otu a, mgbe ahụ ị nọrọ n’ụzọ ziri ezi.
Ebee ka m nwere ike ịnweta igwe okirikiri na UK?
Won achọghị ịga ebe ọ bụla ọzọ. Naanị ndị Cycle Tech nyere ikike maka ndị ịnyịnya ígwè na UK na Ireland. Chọtaghị onye ọrụ ụgbọ ma ọ bụ ọkachamara igwe kwụ otu ebe dị gị nso? G in i mere na i gagh i ezip u ok cle e ozi gi ka i zigara ha a Cy ok `e Cycle Tech
Ebee ka m nwere ike ịga mụta ịkpa igwe igwe kwụ otu ebe?
Isiokwu dị iche iche site n'afọ ruo n'afọ iji nọrọ ugbu a na teknụzụ igwe ọhụrụ kachasị ọhụrụ. UBI na ndi Fox Racing Shox na aru oru inye Fox Master Tech Clinics. Iclọọgwụ otu ụbọchị, maka ndị na-ahụ maka igwe kwụ otu ebe nwere ahụmahụ. Ndị nkuzi ga-enye ụmụ akwụkwọ ndụmọdụ kachasị ọhụrụ, usoro na ọzụzụ aka maka ijikwa ndụdụ Fox.